Ukpa peptide bụ obere molekụla collagen peptide, ọ na-amịpụtara si ukpa site ezubere iche bio-enzyme mgbaze na ala okpomọkụ akpụkpọ ahụ nkewa technology. Ukpa peptide nwere mma ekwukwa n'akwụkwọ Njirimara, ọ bụ ọhụrụ na mma ọtọ akụrụngwa maka nri.
Akụrụngwa: Ọ bụ ngwongwo collagen ewepụtara site na ọkpụkpụ bovine. Mgbe etinyere oke ọgwụ na nsị nwoke, enzymes na-ejikọ ya na teknụzụ inyeaka inyeaka dị elu iji wepụta protein dị elu site na ọkpụkpụ bovine.
Usoro: Mgbe eduzi mgbaze enzyme, decolorization, deodorization, ịta, ihicha, na-eme ka ngwaahịa na elu peptide ọdịnaya.
Atụmatụ: Edo ntụ ntụ, ubé-acha acha, ìhè uto, kpamkpam soluble na mmiri na-enweghị ihe ọ bụla ọdịda ma ọ bụ irighiri ihe.